Ividiyo: Isiphepho esimangalisayo sikhanyisa intaba-mlilo iPopocatépetl | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imvelo kwesinye isikhathi ingasimangaza ngemibukiso emangalisayo. Imibukiso esingajwayele ukuyenza, njengaleyo abaseMexico ababengayijabulela ngo-Okthoba 13. Ngenkathi intaba-mlilo iPopocatepetl iqhuma, isivunguvungu sikagesi esimangalisayo sayikhanyisa.
Umcimbi uqoshwe ngu Ama-Webcams aseMexico futhi isakazwe yikhasi layo Facebook, yize kungathathanga isikhathi eside ukusabalala ezinkundleni zokuxhumana, futhi namuhla sekunezibono ezingaphezu kwesigamu sesigidi.
Intaba-mlilo iPopocatépelt, okumanje isebenza ngokugcwele futhi ingabeka amadolobha azungezile engcupheni ezinsukwini ezizayo ngenxa yokuwa kwezicucu ze-incandescent nomlotha, ibingazi, ingomunye wabaphikisi umbukwane wemvelo ongenakulibaleka. Ngo-Okthoba 13 odlule, ebusuku, isiphepho sikagesi sakhishwa emgodini waso ngenkathi sikhipha umusi wamanzi negesi.
Ngokusho kukaCenapred, bakhonjwa indlela 141 ukuphefumula ngalobo busuku. 141 lokho, kanye nokukhanya kombani owe ngokungapheli, kwabangela izigidi zabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amaningana ukuba babambe ongezansi emcimbini wemvelo omangalisa kangaka. Ingabe uzoba ngomunye wabo?
Kuyesabeka, akunjalo? Intaba-mlilo iPopocatépetl itholakala maphakathi neMexico, amanye angama-72km eningizimu-mpumalanga yenhlokodolobha. Inesimo esiyindilinga esiyindilinga, nezinguzunga zeqhwa ezingapheli esiqongweni sentaba. Kungokwesibili okuphezulu ezweni, nokuphakama okuphezulu kwe- Amamitha angu-5500 ngenhla kolwandle.
Kuyintaba-mlilo esebenzayo. Empeleni, ukuqhuma kokugcina kwaba ngo-Ephreli 18, 2016, lapho kwaqala khona ukukhipha umlotha kwalandela ukuqhuma okuncane, kwabe sekuxoshwa imvula yempahla ye-incandescent efinyelele ebangeni eliqhele ngamakhilomitha ayi-1,6, okhiqize i-fumarole enwetshiwe ngamakhilomitha ambalwa, ethinta amadolobha namadolobha ambalwa aseduze.
Ubucabangani ngalombukiso? 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-VIDEO: Isiphepho esinomdlandla sikhanyisa intaba-mlilo iPopocatepetl
Ngabe sisebenza noma silinde ukuguquka kwesimo sezulu?